Study Tips Archives - Burburin DAT The
January 1, 2021 /in Talooyin Study /by Kip Nielsen
Waxaan ka caajisay baranaya DAT ah, sababtoo ah waxaan ahaa sidaas naxdin iyo ma uu ogayn meel ay u bilaabaan. Anigu ma aan raaci mid ka mid ah qorshe waxbarasho oo aan soo ogaaday on forums online, maxaa yeelay, kulligood way wada baahan yahay qalab waxbarasho gaar ah oo aan ma lahayn iyo ma doonayaan in ay iibsadaan. Sidaas darteed, Waan ku soo dhamaaday abuuraya aan jadwal u gaar ah oo waxbarasho si ay isugu diyaariyaan DAT aan u malaynayaa in aad ka heli doontaa mid aad u faa'iido leh. Ka dib markii la soo maray qalafsanaanta…
Tani waa su'aal guud oo dadka intooda badan ku baryo diyaarinta Imtixaanka Admission Ilkaha. Waxaan wax ka qaban doonaa su'aashaan sidoo kale waxay bixiyaan xog muhiim ah oo caawin doona in aad qorshaynayso baxay fasalada undergraduate iyo qaadan DAT ee waqti macquul ah. Inta badan dadka ku talin lahaa in aad qaadato DAT midig dib markii ay kaalinta aad Biology Guud, Chemistry Guud, iyo Organic Chemistry loo baahan yahay koorsooyin si wax walba waa cusub in maankiinna. Taasi way kari kartaa…